China JQ014B Mechanical Tally Counter 4 Digit Isandla Esiphethwe nguMvelisi kunye noMthengisi | Wenchang
JQ014B Mechanical Tally Counter 4 Digit Isandla Esibanjiweyo
4-manani tally cofa counter, ngqo, ezinzileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa. Bala amanani amane ukusuka ku-0000 ukuya ku-9999. Cwangcisa iqhina kwicala elinye ngesangqa sentsimbi ukuze ubambe izandla ngokukhuselekileyo. Zilungele izicelo ezinje ngonyango, impahla eyolukiweyo, oomatshini, iindawo zokugcina iimpahla, iitheminali zothutho, ukubeka esweni ukugcwala kwezithuthi, ukuhamba kwabahambi ngeenyawo okanye ukubala kwesihlwele sebhola, ukugcwaliswa kwabahambi ngenqwelomoya kunye nezinye ezininzi.
Umzekelo JQ014 JQ014-A JQ014-B JQ014-C
Bonisa ubungakanani bedijithi H × W 4.4 mm × 3 mm
UMax. ukubala okuqokelelweyo 9999
Unikezelo umlinganiselo 1: 1
Isantya sokubala S200 ukubala / umzuzu
Torque ≤8 N · cm N9 N · cm
Imiboniso eyodwa Igobolondo ephuzi eplastiki Ngomsesane Ngomsesane kunye nesakhelo Ngenkxaso yesiseko
JQ014C Mechanical Tally Counter 4 Idesika Desk Mo ...